HomeKit: chii zvazviri uye zvazvino zvigadzirwa zvinoenderana - iPhone News | IPhone nhau
HomeKit (Casa muApp Store muSpain) chishandiso chinobatanidza zvigadzirwa zvakasiyana zvinoenderana uye zvigadzirwa zve dzora imba yako nenzwi. Zviito zvakaita sekubatidza mwenje, kuona kuti ndeapi masokisi akamisikidzwa kana kana paine musuwo wakazaruka zvinogoneka nekuda kweizvi apple app.
Isu tinosimbisa kuti iyi app inowanikwa kune ese Apple zvishandiso: iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod uye Mac.
Kuti uwane izvi chinhu chekutanga chichava kuva zvishandiso zvemumba mumba medu, senge mwenje inoenderana neapp iyi. Saka kana iwe ukati "Hei Siri, dzima mwenje," "batidza thermostat," kana "batidza terevhizheni," inokurumidza kukuteerera.
Zvimwe zvekushandisa zvaunogona zvakare kudzora zvigadzirwa zvako zvine hungwaru zvinotevera:
Kuisa mimhanzi pamatauri mune imwe kamuri
Batidza switch kana kudzima
Pfeka kana bvisa iyo thermostat
Vhura kana uvhare magonhi ako egaraji
Chengetedza mamiriro ekunze, TV, windows ...
Kunze kwekuratidzira maodha nezwi isu tichavawo nemabatiro ari nani eimba yedu, izvo zvinogona kutibatsira, semuenzaniso, kuchengetedza zvimwe pamagetsi. Tinogona kuona kana tine mwenje, terevhizheni kana mapulagi kuitira kudzora mashandisiro atiri kupa kuitira kuti arege kushungurudza.
Iyo ine kuwirirana kuzere pane chero eanogadzira anoshandisa iOS, kunyanya kana akagadziridzwa kune yazvino vhezheni, uye yechina chizvarwa Apple TV kana yepamusoro.
Iyo ine intuitive uye yakapusa interface uko, nemabhokisi anomira akachena kuti chena kunyevera kuti chimwe chinhu chakaitwa, unogona kubata kana iwe uchida kuve nemwenje kana kudzima, kana kana wakasiya musuwo kana hwindo rakavhurika. Izvo zvakare zvinobatsira kuti unzwe wakachengeteka mumba mako uye uchiziva kuti hauna kukanganwa kuvhara chero chinhu (isu tatoziva kuti kumhanyisa kunonyengera).
Kana iwe uchida kuziva nhau dzichangoburwa nezve iyo HomeKit app, ine ayo akakosha kwazvo maficha uye inoenderana zvigadzirwa, unogona kuverenga yekupedzisira awa pazasi.
iPads ichashanda semidziyo yepamba yeHomeKit ine iOS 16
kubudikidza louis padilla inoita 5 mazuva .
Pasinei nezvairatidzika pakutanga, Apple yakasimbisa kuti iyo iPad icharamba ichishanda sepakati…
Ongororo yeMeross LED Strip inoenderana neHomeKit
Takaedza Meross RGBW LED Strip inoenderana neHomeKit, ine hurefu hwemamita mashanu uye ese maficha…
Iyo iPad haisisiri hubhu yeHomeKit
kubudikidza louis padilla inoita Mavhiki e4 .
iOs 16 inounza akawanda matsva maficha kuHomeKit, senge yakanyatso gadziridzwa Imba app uye iri kuuya Matter rutsigiro, asi…
Aqara inotanga chitoro chayo chezvigadzirwa paAmazon Spain
Aqara inotanga chitoro chezvigadzirwa muAmazon Spain, iyo yatinogona kuwana zvigadzirwa zvayo zviri nyore uye nekukurumidza…
kubudikidza Miguel Hernandez inoita 2 mwedzi .
Kwapera gore rapfuura kubva pakatangwa zviri pamutemo AirTag uye vamwe vashandisi vatotanga kubvunza ...
Aqara inogadziridza sensor yayo inofamba nekuzvimirira kukuru uye kunzwa
Aqara inoenderera mberi nekuvandudza kabhuku kayo kakakura keHomeKit-inoenderana zvigadzirwa zvepamusha, uye ichangobva kuvandudza inofamba sensor…
kubudikidza louis padilla inoita 3 mwedzi .
Isu tinoongorora iyo nyowani Twinkly LED tambo, ine hurefu hwemamita gumi, RGB mavara, kuenderana neHomeKit, Alexa ...
Philips Hue uye HomeKit, vanobatana vakakwana
Takatanga nePhilips Hue imba otomatiki mwenje neiyi yekutanga kit inosanganisira zvese zvaunoda:…
Widget Yepamba, pakupedzisira majeti eHomeKit [GIVEAWAY]
Isu takaedza iyo Kumba Widget yeHomeKit application iyo inotibvumira kugadzira majeti eHomeKit anosanganisira masensa, zvishandiso uye nharaunda, ine…
Isu tinoongorora iyo Meross smart power strip yeHomeKit
Isu takaedza chishongedzo cheHomeKit chinokutendera kuti udzore zvishandiso zvakati wandei wakazvimirira nemaotomatiki, nharaunda kubva kuapp...
Aqara G2H Pro: HomeKit kamera, aramu uye Zigbee bhiriji
Isu tinoongorora iyo itsva Aqara G2H Pro kamera, chizvarwa chitsva cheimwe ine mukurumbira HomeKit kamera iyo…